ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တိုက်တွန်းခြင်း - Hello Sayarwon - စာမျက်နှာ 1 အနက်မှ 1
အားကစားလုပ်တာက ကောင်းတာကို သိပေမယ့် လူတိုင်း မလုပ်ဖြစ်ကြပါဘူး။ ဒီလို နေ့စဉ် အားကစားလုပ်ဖြစ်ဖို့က စိတ်အားထက်သန်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီ စိတ်အားထက်သန်မှု ဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လို မွေးမြူကြမလဲ။
ကျန်းမာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လိုက်မဟဲ့ဆိုပြီး ၅ရက်လောက်နဲ့ လက်လျှော့သွားတဲ့သူတွေ ရှိကြလား။ တကယ်တော့ လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်တဲ့သူတိုင်းက ဒီလိုပါပဲ။ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ လုပ်မယ်ဆို အပြင်းအထန်စလုပ်လိုက် ရက်ပိုင်းလောက်လည်းနေရော ဒုံရင်း ပြန်ဖြစ်သွားလိုက်နဲ့ ဒီလိုပဲ ချာလည်လည် နေတတ်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာစေတယ်ဆိုတာ လူတိုင်း သိပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ လိုက်လုပ်တဲ့သူ ရှားပါတယ်။ ပုံမှန်လုပ်တဲ့သူဆို ပိုတောင် ရှားပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတော့ လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် ပုံမှန် မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ကြားထဲမှာ ပြတ်ပြတ်သွားလို့ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့။ ဒီတစ်သက်တော့ လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်နိုင်တော့ဘူးလို့လည်း မတွေးပါနဲ့။ ခုပြောမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်း စလိုက်ရအောင်။ လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ဖြစ်စေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ All or None lawကို ရှောင်ပါ။ All or None […]
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်တိုက်တွန်းခြင်း နဲ့ ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာများကို ပိုမိုသိရှိလိုသည်
ကိုယ်လက် လေ့ကျင့်ခန်း တွေ လုပ်ခြင်းဟာ ကိုယ်ခန္ဓာကျန်းမာကြံ့ခိုင် စေနိင်ရုံတင်မကပဲ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကိုပါ တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ကြွက်သားတွေကို တောင့်တင်းစေခြင်း၊ အဆီကျစေနိုင်ခြင်း ၊ နှလုံးအားကောင်းစေနိုင်ခြင်း၊ သွေးပေါင်ထိန်းပေးနိုင်ခြင်း စတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေ အများရှိပါတယ်။ ဒီနေ့ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာကတော့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ဘယ်လို အထောက်အကူပြုနိုင်တယ် ဆိုတာလေးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခြင်းနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုများ (၁) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အချိန်မှာ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေကို ကောင်းမွန်စေနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်း နဲ့ အခြား သဘာဝပစ္စည်းလေးတွေကို အများကြီးထုတ်ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အခါမှာ သင့်အတွက် လန်းဆန်းတက်ကြွပြီး ပျော်ရွှင်တဲ့ ခံစားမှုမျိုးရစေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ endorphin လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းလေးတွေက နာကျင်မှုကို […]
သင့်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကြွက်သားတွေကို အသုံးပြုပြီး လှုပ်ရှားရတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းမှန်သမျှဟာ ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ရေကူးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ကခုန်ခြင်း စသဖြင့် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းဟာလည်း မျိုးစုံရှိပါတယ်။ အဆိုပါလေ့ကျင့်ခန်းများဟာ ပြုလုပ်သူများအတွက် ကိုယ်ရောစိတ်ပါ လန်းဆန်းတက်ကြွစေပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အခုတစ်ခေါက်တော့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အကြောင်း ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်ပြုလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ အကြောင်း အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်လား။ ၁။ ပျော်ရွှင်ခြင်း ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ခန်းများဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေကို တိုးတက်စေပြီး စိတ်ပူခြင်း၊ စိတ်ကျခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးခြင်း စတာတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ ဆီရိုတိုနင်၊ နော်အပီနက်ဖရင်း စတဲ့ဟော်မုန်းတွေကို ဦးနှောက်ကနေ ပိုမိုခံစားနိုင်ပြီး စိတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အင်ဒေါ်ဖင်ဟော်မုန်းကို ပိုမိုထွက်စေတာကြောင့် အကောင်းမြင်တဲ့ ခံစားချက်တွေကို […]
Dr. Thant Zin မှ ရေးသားသည်။ • 31/05/2022
အဝလွန်တဲ့သူတော်တော်များများရဲ့ အိပ်မက်ကတော့ ပိန်ချင်ကြတာပါပဲ။ ဒီလိုပိန်ဖို့အတွက် အစားတွေကို ဆင်ခြင်ရတယ်။ နေ့စဉ် အစာအာဟာရကို သေချာဂရုစိုက်ပြီး မျှတစွာစားသုံးကြရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မှန်မှန်လုပ်ရတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ အကုန်လုံးကို ပြင်ရပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ အားတက်သရောနဲ့ ကြိုးစားပမ်းစား လုပ်တတ်ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အဖျားရှူးသွားတတ်တာ၊ ပင်ပန်းပြီး ရိုးသွားတာ၊ တွန်းအားမရှိတော့သလို ဖြစ်ပြီး ကိုယ်လုပ်နေသမျှ အကုန်လုံးကို ရပ်လိုက်ကြတော့တာပါပဲ။ အဲ့တော့ ဘာဖြစ်မလဲ၊ ပင်ပန်းခဲ့သမျှ အချိန်တွေ၊ ခွန်အားတွေ အလဟဿဖြစ်ပြီး ကိုယ်စခဲ့ရတဲ့ ပုံစံအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမှာပေါ့။ ဒီလိုမျိုး ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် တွန်းအားဖြစ်စေဖို့ မိမိကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ်ချက်၊ အိပ်မက်၊ စံနှုန်း၊ ရည်မှန်းချက် အစရှိတဲ့အရာတွေကို ထားထားဖို့ အရေးကြီးတာပေါ့။ ဒီတော့ ကိုယ်အလေးချိန်ချဖို့ ကြိုးစားနေရင်းနဲ့မှ ရပ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့ […]
Dr. Htet Htet Zaw Win မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။ •4ပတ် အကြာက
ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy)ဟာ ဆေးပညာရဲ့ တစိတ်တဒေသ ဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နာကျင်မှုတွေကို ဖြစ်စေတဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာအများအပြားကို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း (Physiotherapy) က ဘယ်လိုပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းကုသပေးနိုင်မလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ အရိုးအကြောကြွက်သားဆိုင်ရာ ပြဿနာများ (ကြွက်သား၊အရွတ်၊အရွတ်ကြော၊အဆစ်အမြစ်၊အရိုး စသည်) ခြေဖဝါးပြားခြင်း ခြေဖဝါးမှာကွေးနေတဲ့နေရာမရှိတော့ဘဲ တဖြောင့်တည်းဖြစ်သွားတာမျိုးကို ခြေဖဝါးပြားခြင်း လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒီလို ပြားနေတာကြောင့် သင်မတ်တပ်ရပ်တဲ့အခါ ခြေဖဝါးဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ တပြေးတည်း ဖြစ်လို့ နေပါလိမ့်မယ်။ သင်ကလေးဘဝမှာ အဆိုပါ ခြေဖဝါးအကွေးလေးဟာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း မရှိသေးဘဲ အသက်ကြီးလာမှသာ တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေမှာ ခြေဖဝါးအကွေးလေးဟာ လုံးဝဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမရှိပါဘူး။ ထိခိုက်ဒါဏ်ရာ ဒါမှမဟုတ် အခြားသော ပြဿနာတွေကြောင့်လည်း ဒီအခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးပြားရင် ခြေထောက်၊ခြေကျင်းဝတ် ဒါမှမဟုတ် နောက်ကျောတို့မှာ နာကျင်မှုကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ခြေဖဝါးပြားခြင်းကို ခန္ဓါကိုယ်လှုပ်ရှားလေ့ကျင့်ပေးခြင်း […]
စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် အကျိုးရှိရုံသာမက သင့်ကျန်းမာရေးကိုပါ အထောက်အကူပြုတဲ့အပြင် ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို သိရှိနိုင်ဖို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။ ကယ်လိုရီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေတယ် စက်ဘီးစီးခြင်းဟာ ကယ်လိုရီများစွာ လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် ၁၅၅ပေါင်လောက်ရှိသူတယောက်အနေနဲ့ ပုံမှန်အရှိန်နဲ့ နာရီဝက်လောက် စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင် ၂၆၀ ကယ်လိုရီလောက် လောင်ကျွမ်းစေပါတယ်။ အကယ်၍ သင့်ကိုယ်အလေးချိန် ပိုများရင် ဒါမှမဟုတ် အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ ပိုပြီးအားစိုက်နင်းရင် ကယ်လိုရီပမာဏ ပိုလို့တောင် လောင်ကျွမ်းပါလိမ့်ဦးမယ်။ အဆစ်အမြစ်ထိခိုက်မှုကို နည်းစေမယ် ရွရွပြေးတာ၊ဘောလုံးကန်တာအပါအဝင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားအများအပြားဟာ အဆစ်အမြစ်တွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာဟာ အဆစ်အမြစ်တွေအပေါ် ပြင်းပြင်းထန်ထန် မထိခိုက်စေ၊အားမစိုက်ရစေဘဲ နှလုံးညှစ်အားကို ပိုမိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Cleveland Clinic ရဲ့ အဆိုအရ ပုံမှန်ရှိရမယ့် ကိုယ်အလေးချိန်ထက် အနည်းဆုံး ပေါင် ၅၀လောက် ပိုနေသူတွေအတွက် စက်ဘီးစီးလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဟာ အထူးသင့်တော်တယ်လို့ […]
ဖျတ်လက်တက်ကြွတဲ့ ခန္ဓါကိုယ်မျိုး ပိုင်ဆိုင်စေဖို့
ခန္ဓါကိုယ်ဖျတ်လတ်တက်ကြွနေဖို့ အရေးကြီးကြောင်းကို လူတော်တော်များများ သိထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းအပြင် ကျန်းမာမျှတစေတဲ့ အစားအသောက်ကိုလည်း ချင့်ချိန်ပြီး စားသင့်ပါတယ်။ ခုပြောမယ့် အချက်တွေကတော့ တက်ကြွဖျတ်လတ်တဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါဖြစ်စေဖို့ အထောက်အကူပေးနိုင်တဲ့ အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁။ အာဟာရစုံလင်စွာရရှိအောင်စားပါ အသီးအနှံ၊ ပြောင်း၊ ပဲနဲ့ အဆီထုတ်ထားတဲ့နို့ စတဲ့ စုံလင်တဲ့အစာတွေ စားခြင်းဖြင့် သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့အဟာရတွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ အဆီနဲ့ အချိုဓါတ်များတဲ့ အစားအသောက်တွေကို လျှော့ဖို့ ရှောင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ၂။ ပြောင်းဆံကနေ စွမ်းအင်ရယူပါ။ စပါးစေ့နဲ့ ပြောင်းစေ့တွေက စွမ်းအင်ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဂျုံနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ပေါင်မုန့်နဲ ဆန်လုံးညိုတွေက အာဟာရဖြစ်စေပြီး ကယ်လိုရီနည်းတဲ့အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့အစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၃၊ ကြွက်သားအတွက် ပရိုတင်းဓါတ်လိုအပ်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှာ ကြွက်သားကို ထိန်းသိမ်းဖို့နဲ့ အသစ်ထပ်ဖြစ်စေဖို့ ပရိုတင်းဓါတ် လိုအပ်ပါတယ်။ အဆီနည်းတဲ့အသားဖြစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အပြောင်းအလဲဖြစ်အောင် […]
Dr. Phio Thiha မှ ရေးသားသည်။ • 16/09/2020
တစ်နေ့တာလုံး ပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွဖြစ်နေစေဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ? ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနဲ့ ခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းအပြင် တစ်နေ့လုံးတက်ကြွနေစေနိုင်တဲ့ တခြားနည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ သင်မှတ်ထားရမှာက သင်လှုပ်ရှားလေ သင့်ကိုယ်ထဲက ကယ်လိုရီပိုလောင်ကျွမ်းလေ သင့်သွေးချိုကို ပုံမှန်ထားနိုင်လေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်အကြာကြီးထိုင်ခြင်းက ကျန်းမာရေးအတွက်ထိခိုက်နိုင်လားဆိုတာ သိစေဖို့ လေ့လာမှုတွေပိုပိုပြီးလုပ်နေကြပါတယ်။ ရုံးမှာထိုင်နေရင်းက တစ်နာရီတစ်ခါလောက် ခြေလက်အကြောဆန့်ပြီး ရုံးခန်းထဲလမ်းလျှောက်ပေးခြင်းက ခုံမှာဘဲနာရီပေါင်းများစွာထိုင်နေတာထက် သာပါတယ်။ သင်ထပြီးလှုပ်ရှားနိုင်သလောက် လှုပ်ရှားပါ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတာတွေက သင်လုပ်နိုင်တာလေးတွေပါ။ အလုပ်မှာဆိုရင် … ကားပါကင်နေရာနဲ့ ရုံးခန်းတွေမှာသွားလာရင် ဓါတ်လှေကားအစား ရိုးရိုးလှေကားသုံးပါ။ ရုံးမှာတစ်နာရီတစ်ခါလောက်ထပြီး ခြေလက်ဆန့်ပြီးရုံးတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်ပါ။ သင့်ခုံမှာဘဲ ထပြီး အကြောဆန့်ပါ။ နေ့လည်စာစားချိန်ဆိုရင် စားသောက်ဆိုင်ဆီ လမ်းလျှောက်သွားပါ။ တကယ်လို့ သင်ကဘတ်စ်ကားတွေ ရထားတွေစီးပြီး အလုပ်လာတယ်ဆိုရင် မှတ်တိုင်စောဆင်းပြီး ရုံးထိကျန်တဲ့ခရီးလမ်းလျှောက်ပါ။ သင့်ခုံမှာထိုင်နေတုန်း ခုံနဲ့လုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပါ။ Fidgetဆိုတဲ့ ခုံမှာထိုင်ရင်းလုပ်လို့ရတဲ့ လှုပ်ရှားမှုအသေးစားလေးတွေကို သုံးလို့ရမယ်ဆိုရင်သုံးပါ။ အိမ်မှာဆိုရင် … ခွေးကိုခေါ်ပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။ သင့်ခြံထဲက အမှိုက်လှဲတာလိုမျိုး သစ်ရွက်ကောက်တာလိုမျိုး အလုပ်တွေလုပ်ပါ။ တံမြက်စည်းလှည်းခြင်း ပန်းကန်ဆေးခြင်းစတဲ့ အိမ်အလုပ်တွေကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ။ ကလေးတွေနဲ့ ကစားပေးပါ။ သင်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းကြော်ငြာလာရင် လမ်းထလျှောက်ပါ။ ကားကနေ တစ်ခုခုသယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လှေကားပေါ်သယ်တာဘဲဖြစ်ဖြစ် […]
အားကစားပြုလုပ်ခြင်းဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်နဲ့ခန္ဓါနှစ်ခုစလုံးကို အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိစေပါတယ်။ ဘယ်အားကစားမျိုးကိုပဲ လုပ်လုပ် လိုအပ်မှာဖြစ်တဲ့ ကိုယ်ကာယ ကြံ့ခိုင်မှုကို ခဏဘေးဖယ်ထားမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ အားကစားပြုလုပ်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်အားကောင်းဖို့ လိုအပ်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို တက်ကြွစေ၊မြှင့်တင်ပေးစေတဲ့ endorphins လိုမျိုး ဓါတ်ပစ္စည်းတွေလည်း (ဘယ်လိုအားကစားမျိုးကိုပဲ လုပ်လုပ်) ထွက်လာစေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိပြုသင့်တဲ့အချက်က အားကစားပြုလုပ်ခြင်းဟာ အပျော်သက်သက်ချည်းပဲတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ခံစားမှုအရ ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်စေသလဲ။ အားကစားပွဲတွေမှာ ပါဝင်ကစားမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ နည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Michael Babyak ဦးဆောင်တဲ့ သုတေသန အဖွဲ့ဟာ စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရသူတွေကို အုပ်စုလေးတွေခွဲပြီး လေ့လာမှု ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလေ့လာချက်အရ အားကစားလှုပ်ရှားမှုတွေကို လေးလတိတိပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာရှင်တွေဟာ ဆေးချည်းပဲသောက်တဲ့၊ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသောက်တာနဲ့ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း […]
သင်က ဘယ်လို ခန္ဓါကိုယ်အမျိုးအစားပိုင်ရှင်လဲ
လူသားတွေရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါဟာ ဆန်းသစ်တဲ့ အသေးစိတ်ကျမှုတွေနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးကြွက်သားတွေနဲ့ ပုံဖေါ်ထားမှုနဲ့ ကြွက်သားတွေနဲ့ အဆီတွေ ဖြန့်ဝေမှုပေါ်မူတည်ပြီး ကိုယ်ခန္ဓါပုံစံဆိုတာ ဖြစ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ဆယ့်ရှစ်နှစ်လောက်ရောက်တဲ့အခါ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါကို သေချာစွာ သတ်မှတ်လို့ရနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝပုံစံတွေ ပြောင်းလဲ သွားချိန်မှာတော့ ကိုယ်ခန္ဓါတွေဟာလည်း ပြောင်းလဲသွားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓါအမျိုးအစားနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာတွေ သိသင့်သလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့် လူတွေဟာ ကိုယ်ခန္ဓါပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီး သိပ်ပြီး ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ ပထမဦးစွာ ကိုယ်ခန္ဓါပုံစံကို သေချာစွာသိရှိခြင်းဟာ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်မယ့် အဝတ်အစားရွေးချယ်မှုမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ သစ်တော်သီးပုံ လူတစ်ယောက်ဟာ သူတို့ခြေထောက်တွေ ကို ကြီးစေတာကြောင့် ဂျင်းတွေကို ဘယ်တော့မှ မဝတ်သင့်ပဲ ပန်းသီးပုံစံရှိတဲ့ သူဟာတော့ ဗိုက်ပူတာကို သိသာစေတာကြောင့် […]
သင် လေ့ကျင့်ခန်း ဘယ်လောက်လုပ်ဖို့ လိုအပ်လဲ
သင် လေ့ကျင့်ခန်းဘယ်လောက်လုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ ? ရုံးမှာအမြဲထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ သူတွေက တစ်ရက်ကို တစ်နာရီလောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မှ သာမန်လူတွေနဲ့ အမှီလိုက်နိုင်မယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာ လမ်းလျှောက်တဲ့ ခြေလှမ်းကို pedometer (ခြေလှမ်းတိုင်းကိရိယာ)နဲ့ တိုင်းရာမှာ အလွန်နည်းကြောင်း တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သင်ကဒီလို လှုပ်ရှားမှုနည်းတဲ့လူမျိုးဆိုရင် pedometer challenge ကို စလိုက်ပါ။ Pedometer တစ်ခုကို ဈေးအရမ်းလည်းမကြီး အရမ်းလည်းမပေါတဲ့ဟာထဲက ရွေးဝယ်လိုက်ပါ။ တစ်နေ့လုံးပတ်ထားပါ။ အမေရိကန်လူမျိုးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ရက်ကိုပျှမ်းမျှ ခြေလှမ်းပေါင်းက ငါးထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခြေလှမ်းတွေက ဒီထက်နည်းနေမယ်ဆိုရင် လေ့ကျင့်ခန်းကြာကြာလုပ်ရန် စီစဉ်ဖို့ လိုပါပြီ။ တစ်ရက်ကို ခြေလှမ်အနည်းဆုံး တစ်သောင်းပြည့်ဖို့က ပန်းတိုင်ပါ Pedometer က သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို ချက်ချင်းပြန်ဆန်းစစ်ပေးနိုင်တဲ့ ကိရိယာတစ်ခုပါ။ သူဟာ သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုနည်းနည်းချင်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် တိုးတက်လာအောင် ကူညီပေးပါတယ်။ ဒီပြောင်းလဲမှု သေးသေးလေးတွေကနေ သင့်အနေနဲ့ ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှု […]